आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कहिले? – Halkhabar kura
२७ माघ २०७६, सोमबार २१:३६
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कहिले?
मेघराज नेपालली – आज देशको राज्य ब्यबस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यो ब्यबस्था ल्याउन लामो समय देखी बिभिन्न राजनीतिक पार्टी जनताको बलिदानी यात्रा गरेर ल्याइएको हो। तर हाम्रो देश आज झनै दयनिय अवस्थामा झरेकोछ। आज देशका उर्जावान शक्ती बिदेशिका कुल्ली,भेडा चराउने, दैनिक जङल काट्ने काममा ज्यान जीवन गुमाउदैछन। तर देशको संबिधान समाजवाद् उंमुख भनेर लेखिएकोछ। अब जब संबिधान मै समाजवाद लेखिएको छ तो यो देशका नागरिकको मौलिक अधिकारलाई राज्यले कहाँ राखेको छ यो प्रश्न कसैले सोचेको देखिदैन। जवाफ कसै सँग छैन।
आज अरबका जेलमा होस कि चिनको वुवान शहरमा नेपालीको चित्कार सुन्ने कुनै सरकार छ जस्तो हामी लाई लाग्दैन। आज ८०लाख नेपाली बिदेशको भुमिमा खुन पसिना बगाउदैछन। उनिहरु ले पठाएको पैसा बाट देशको अर्थतन्त्र चलेको छ। यदी ईरान अमेरिका युद्द भयो भने सिंगो अरब अशांत हुने छ र त्यो देश बाट नेपालीलाई घर फर्काउनुको बिकल्प हुने छैन। कल्पना गरौ त त्यो दिन नेपालको हालत के होला? कसरी हामीले देशको महँगो ब्यबस्थालाई धानौला?
नेपाली उत्पादन प्रजातन्त्र संगै समाप्त भयो भन्दा म गलत हुने छैन। हिजो अर्थात पंच्यायती ब्यबस्था ले स्थापित गरेका राष्ट्रिय गौरवका उध्योग बन्द गरियो। यो बहादुरिको काम गर्ने नेपाली कङ्रेसको सरकार हो। यहाँको भुमी लाई खन्डिकरन गर्ने काममा यहाँका कथित कम्मुनिस्ट हौ भन्ने हरु कसै भन्दा कम दोसी छैनन। उनिहरु त २०६३साल पछी खेतबारी त छोडौ खोला सार्वजनिक जग्गाका एक नम्बर दुश्मन जस्ता देखिए। कुनै ठाउँ यिनिहरुले छोडेनन। स्वर्गद्वारि आश्रमको ९९२बिघा जमिन कब्जा गरेर केही टाठाबाठाको नाममा ब्रह्म्लुट मच्याएकाछन। जो किसानले त्यी भुमी जोतेका थिए आज उनिहरु भुमिहिन भएकाछन। नेपाल सन्स्क्रित विश्वबिद्यालयको १३७२बिघा जमीन पनि यस्तै ब्यक्तिहरुले कब्जामा ल्याएर बस्ती बसाउने काम गर्दैछन।
भुमाफियाहरु आज ति जमिन बाट खरबपती बन्दै गये तर आज देश मगन्ते राष्ट्र बन्दै गयो। आज हामी माछा मासु दुध दाल चामल तेल कपडा औषधी जुत्ता छाता सबै त हामीले आयात गर्छौ निर्यात गर्ने त हामी सँग युवा बाहेक अरु के पो छ र? तर नेपालमा कृषिको क्षेत्र सुरक्षित छैन यो नेपालको लागि सबै भन्दा खतरनाक काम हो। किन कि हामीलाई चाहिने खाद्यान्न लत्ताकपडा औषधी हामीले उत्पादन गर्न सक्छौ तर यहाँका उध्योगलाई बिस्थापित बिदेशी उत्पादनले गरिरहेकाछन।
तर नेपाल सरकारलाई कुनै चिन्ता र चासो छैन। बिशादीयुक्त खानेकुरा आयात भैरहेकोछ। राज्य बासुरी बजाउदै बसेको छ। कृषकले चल्ला खाल्टो खनेर पुर्छन तर उपभोक्ता १००% मुल्यब्रिद्दीको मारमा परेका छन राज्य सारंगी रेट्दैछ।
भारत बाट हुने तस्करी कै कारण नेपाली किसानको छाकबास उठेको थुप्रै घटना हामी ले भेट्न सक्छौ। आज उखु किसानको पैसा मिल मालिकले नतिर्दा उनिहरुको बिल्लिबाठ भएकोछ। काठमान्डौको त्यो चिसोमा सडकको बास बाट पनि निकास निकाल्न सकिएन। यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के होला दुइतिहाइको कथित कम्मुनिस्ट सरकार लाई? यदी राष्ट्रले साच्चिकै देश हितमा काम गर्न चाहने हो भने दुग्धजन्य पदार्थ बाट बन्ने सम्पूर्ण परीकार बिभिन्न किसिमका चीज(पनीर) हरु बनाउने मेसिन लगाउन राज्यको योगदान हुनु पर्छ अनी दुध धेरै भयो भनेर बाटोमा बगाउनु पर्दैन।
मौसममा टमाटर उत्पादन अत्यधिक हुन्छ त्यो समयमा बिभिन्न सस अचार आदी बनाउने प्रबिधी ल्याउन सरकार लाई के ले रोकेको छ? बोइलर कुखुराको उत्पादन अत्यधिक भयो भने प्याकिङ गरेर बिदेश निर्यात गर्न केले रोकेको छ? दाना महँगो भयो भन्ने किसानको लागि स्व्देशमा मकै गहु धान जौ भट्ट उत्पादन गरेर भारत बाट आउने कुखुरा गाई भैंसी को खाने कुरा आयात बन्द गराउन सरकार लाई के ले रोकेको छ?
अरु कुरा छोडौ सरकारी योजनामा नेपालको लागि चाहिने मलखाद पशुको लागि चाहिने दवाइ नेपाल मै उत्पादन किन गर्दैन नेपाल सरकार? कुरा त ठुला धेरै ठुला गर्छ काम सुन्य रेल पानीजहाज के के हो तर राष्ट्रको लागि जीवन दिने युवाको लागि राष्ट्रले केही गर्दैन। किन कि यो सरकार जमीन्दार माफिया दलाल हरु को हो।
कोल्ड स्टोर खोल्ने र राष्ट्रिय उत्पादनको बृदि आजको आवश्यकता हो। यसैले मात्रा हाम्रो देशको राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थत्रन्त्रको निर्माण गर्नेछ।
Previous कल्पनावाटै यथार्थ जन्मन्छ – सपना त्याग्यौ भने जीवनको कुनै मोडमा पछुताउनु पर्नेछ !
Next देशलाई असफल र टाट पल्टिनबाट कसले जोगाउँछ ? विदेशिएका नेपालीलाई पनि नेपालबारे बोल्ने हक छ